2017 Nchekwa Ul China Manufacturers & Suppliers & Factory
2017 Nchekwa Ul - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka 2017 Nchekwa Ul)
Ezigbo mma nchekwa Mgbochi Nkịtị
Ntughari A na-eji oche edozi oche iji mepụta mpaghara okpomọkụ n'ime ogige nke na-enyere aka ịnọgide na-enwe mmemme nke okpomọkụ. A na-eji usoro mgbakwunye dị iche iche rụọ: E wuru ya na nchekwa nke ọma n'enweghị ihe ọ bụla. Aids na mgbaze 1. Mpempe akwụkwọ carbon carbon, nke nwere ụzarị ọkụ ọkụ na-acha ọkụ....
Middle Size PTC Anu ulo Na-egwu egwu na UL
Middle Size PTC Anu ulo Na-egwu egwu na UL Nkọwapụta ngwaahịa A na-eme ka anụ ụlọ anyị na-ekpo ọkụ site na iji nkà na ụzụ arụ ọrụ dị elu. Kama ụbụrụ ọkụ na-ekpo ọkụ nke nwere ike ịkpata ọnyá na-emerụ ahụ [radiation magnetics], ikpochapu ọkụ, nkwụsịtụ ngwa ngwa na ike nke nnukwu ike, ngwa ngwa anụ ọkụkụ na-ekpuchi PTC...
Ngwá Agha Nri Na-egbuke egbuke Na Njikere UL
Ngwá Agha Nri Na-egbuke egbuke Na Njikere UL Nkọwapụta ngwaahịa Nyere aka na-eme ka ahụrụ gị, ọbara amphibian, ma ọ bụ arachnid na-egbuke egbuke. Igwe ọkụ a dị mfe na-adịgide adịgide na-aga n'ihu na ala ma ọ bụ akụkụ nke ụrọ terrarium gị nke ọma na n'enweghị ihe ọ bụla, na-ekesa oke okpomọkụ ma na-eme ka ebe...
Ulo kpo oku na ikpo oku
Ụlọ na-ekpo ọkụ Ice na Snow maka ọwa mmiri e mere iji chebe ndị mmadụ na ihe onwunwe. Ngwukpo kpo oku maka ahia ma obu ulo. Ngwongwo oku na-ekpo ọkụ dị mma iji gbochie nsị snow dị elu n'elu ụlọ elu, nke nwere ike ime ka ụlọ ahụ daa. Usoro ndị a dịkwa mma maka igbochi ebe snowdrift na-ewu n'elu ụlọ megide ụlọ...
Egwusi egwu maka anu ulo na akwụkwọ ETL
Ọchịchị onwe onye na-achịkwa anụ ọhịa na-eti mkpu na CE Nkọwapụta ngwaahịa Edebere maka ịcha ọkụ nke anụ ụlọ. Ọ bụ ígwè obibi akwụkwọ tiocha na radiation infrared nke ukwuu. Enwere ike iji ya mee ihe dị ka ọgwụgwọ anụ ahụ. Ọkara ogo nke okpomọkụ na-agbanwe mgbe nile, nye anu ulo na-ekpo ọkụ dị ọkụ n'oge oyi....
Ntuzi onwe onye Na-ejide Ulo Mgbochi maka anu ulo na UL
Igwe ọkụ na anụ ụlọ na UL Nkọwapụta ngwaahịa Ihe nkpochapu kpo oku maka anu ulo na - ekpocha ahihia.Different sitere na oku kpo oku, anu anu anu anu anyi bu uzo oku nke kpo oku.High nke oma na ntughari akuku nke oma, nke na - ebute ndi mmadu gburugburu .Ume ihe ojoo, o di mma iji.With Ọrụ PTC, ị ga-echegbu onwe gị...
Nkume Ngwá Agha Dị Ukwuu na UL CE
Mbadamba akwa oku na UL CE bụ maka inye okpomọkụ gị na anụ ụlọ gị. Anyị PTC okpomọkụ mpe mpe akwa bụ ezigbo PTC, anyị bụ ndị mbụ na nanị manufactory na-emepe emepe PTC okpomọkụ pad. Anyị nwere ezigbo mma na ezigbo ego. PTC bụ mkparị nke Positive Temperature Coefficient, nke pụtara ngwaahịa dị mma nke onye mmezi ya...
Ngwongwo nke anu ulo nke na-eme ka ndi mmadu na-ekpochapu oku na OA
Ngwongwo nke anu ulo nke na-eme ka ndi mmadu na-ekpochapu oku na OA Nkọwapụta ngwaahịa Edebere maka ịcha ọkụ nke anụ ụlọ. Ọ bụ ígwè obibi akwụkwọ tiocha na radiation infrared nke ukwuu. Enwere ike iji ya mee ihe dị ka ọgwụgwọ anụ ahụ. Ọkara ogo nke okpomọkụ na-agbanwe mgbe nile, nye anu ulo na-ekpo ọkụ dị ọkụ...
Ọchịchị onwe onye na-achịkwa anụ ụlọ na-egwu egwu na UL
Ọchịchị onwe onye na-achịkwa anụ ụlọ na-egwu egwu na UL Nkọwapụta ngwaahịa Ngwongwo anu anu anu ulo anyi di mma maka ihe ndi ozo, ndi amphibians, umu ogwu, anu, nnunu, nwamba, nkịta, rabbiti wdg. Obu ihe omuma nke oma . Nkpomoku kpochapu n'enweghi nsogbu nsogbu. 42 ℃ ihu igwe, mee ka anụ ụlọ na-ekpo ọkụ na cosey ....
Nkịtị na-ekpo ọkụ na Greenhouse na UL
Nkọwapụta ngwaahịa Nwee mmalite mmalite nke seedlind gị ma belata ubi gị n'oge oyi a site na iji mpe ọkụ eletrik . Okpokoro ọkụ na-eme ka ọnọdụ okpomọkụ dị n'agbata 10 na 20 degrees karịa okpomọkụ ụlọ. Na-enyere aka na osisi gị na-eto ma na-ekpo ọkụ. Ụdị ozuzu ọhụrụ a nwere ike ịmalite oge germination na ọ bụ...
Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ na-eme ka okpomoku na UL
Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ na-emetụta ihe ọkụkụ na UL bụ maka inye okpomọkụ na-emepụta ihe na anụ ọkụkụ na amphibian. Na-elekọta obere anụmanụ na ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ n'oge oyi. Nkọwapụta Ngwaahịa Isi ihe: PVC size: 200 * 300mm, ahaziri dị elekere: 16w, ahaziri aha voltage: 120v, ahaziri dị Max okpomọkụ: 42 ℃ agba:...
2017 Nchekwa Ul 2017 Nchekwa UL Egwu Nchekwa Nche Egwuregwu Nchekwa Elu 220V Saa chaating Film 8W Na-ekpocha akwa Ngwongwo Na-ekpochapu Ul Igwe ihe nkiri na UL